'महिनावारी भएकै बेला आमाको क्रिया गरेँ' ⋆ JINDAGANI.COM
Home » ‘महिनावारी भएकै बेला आमाको क्रिया गरेँ’
जेष्ठ ११, २०७८	0	By कला अनुरागी
‘तिमीहरूले त के दुःख पाएका छौ र ? जुम्लाका मान्छेले पानी खान हिउँ पगाल्नुपर्छ । जुत्ता त देखेका पनि हुँदैनन् । पढ्ने त कुरै नगरौं’, अञ्चलाधिशको भान्सेका रूपमा काम गर्ने बुबाले जब जुम्लाको कुरा सुनाएर उनको चप्पल लगाउने रहरमा चिसो पानी छ्यापिदिए, त्यतिबेलै उनलाई जुम्ली अनुहारमा मुस्कान खोज्ने सपनाको किरोले टोकेको थियो । त्यसैको असरले उनी सरकारी जागिर छोडेर एउटा ‘प्रोजेक्ट’को बहानामा जुम्ला सदरमुकाम खलंगा पुगिन् । त्यहाँ उनले देखे, भोगे र गरेका कुराको फेहरिस्तले अनेक किताबको माग गर्छन् । तर, त्यहीँ भएको बेला भएको तत्कालिन माओवादीले खलंगामा हमला गर्यो । हमलाको त्रास र त्यसपछिको विभत्सता उनले भोगिन्, देखिन् । त्यही भोगाइको अभिलेखीकरण गरिएको पुस्तक ‘खलंगामा हमला’ले ०७० को मदन पुरस्कार पायो । चुपचाप आफ्नो सपनालाई पछ्याइहिँडेकी राधाको चर्चा सुरु भयो । भलै, त्यसअघि नै शान्ति निर्माणमा गरेको कामका लागि उनले केही अन्तराष्ट्रिय अवार्ड पाइसकेकी थिइन् । त्यसको चर्चा नेपालमा त्यति भएको थिएन, मदन पुरस्कारले भने उनलाई नेपालीबीच चिनायो । त्यसपछि पनि उनी निरन्तर आफ्नो सपना पछ्याई हिँडेकी छिन्, सामाजिक र साहित्यिक दुवै क्षेत्रमा ।
त्यसको कारण उनलाई थाहा थियो, ‘म उल्टो बग्छु । उनीहरूले भनेजस्तो कुरा गर्दिनँ । एनजिओमार्फत आफ्नो जीवन सुखको तला थप्दिनँ । अनि मैले पुरस्कार पाएकोमा उनीहरू किन खुशी हुने ?’
उनी आफ्नो उल्टो बगाइबारे स्पष्ट पार्न भन्छिन्, ‘जस्तो कि, तराइ बन्दबारे चार महिनासम्म कुनै मानवअधिकारकर्मी बोलेनन् । मानवअधिकार र शान्तिकै नाममा पैसा खाइरहेका एनजिओ र मानवअधिकारवादी संस्थाले बोलेनन् । मिडियाले धरी बोलेन । बोले पनि बायस भएर बोले । त्यसपछि म पाँच हजार सापट मागेर मधेस गएँ । निर्णायक वार्ता गरेर शान्तिले बाँच्न पाउने अधिकारको वकालत गरेँ । पछि माइतीघर मण्डलामा धर्ना सुरु गर्न पहल गरेँ । यो सबै उल्टो धार हो ।’
केही उदाहरण पेश गर्छिन्, ‘अहिले मेरो कामबाट प्रभावित भएर काम गर्न विदेशी पनि आएका छन् । हामीसँग चिया खुवाउने पैसा पनि छैन, तर पनि दुःख गरिरहेका छन् । यसले आशा जगाएको छ ।’
तैपनि अहिलेसम्म एक्लै हिँड्नुपरिरहेको अनुभूति भने मनमा छ नै ।
तर लेखनयात्रा निरन्तर थियो । खलंगामा पुगेपछिचाहिँ उनले लेखनलाई किताबकै आकार दिन बाध्य भइन् । ‘भिडन्तको दृश्य र भोगाइले मलाई मर्माहत बनायो । डिएसपीको पुठाको हड्डी भनेर कालो डल्लो टिपिरहेका पुलिस देखेँ । क्षतविक्षत लासहरूको चाङ देखेँ । सोचें– म मर्न सक्थें । बाचेँ । बाँच्नुको पछाडि यहाँको यथार्थलाई मैले प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने दायित्व छ । काठमाडौंले कर्णालीलाई बुझ्दैन । मैले उसलाई सुनाउनुपर्छ । म लेख्नकै लागि बाँचेको हो । त्यसपछि मैले पुस्तक लेखेँ’, उनले सम्झिन् ।
त्यसो त उनलाई राजनीतिक पार्टी र एनजिओ उस्तै लाग्छन् । राजनीतिक पार्टी नै एनजिओ, एनजिओ नै राजनीतिक पार्टीजस्ता छन् । ‘पार्टीका नेता गफ दिन्छन् सिंगापुरसम्मको । तर त्यसको लागि कुनै योजना बनाउँदैनन् । एनजिओ पनि जनताको अधिकारको लागि काम गर्ने भन्छन्, तर जनताको आवश्यकतामा होइन, आफूलाई पैसा आउने काम गर्छन् । पैसा राजनीतिक पहुँच वा अन्य कुनै सम्बन्धका आधारमा पैसा आउने भएपछि एनजिओ खोलिन्छन्,’ उनले भनिन् ।
आफ्नी आमालाई घरबाहिर राख्ने, आफूचाहिँ भित्र बस्ने संस्कारले शान्ति सँधै खल्बल्याइरहेको उनी अनुभूति गर्छिन् । ‘छाउघरमा कति बलात्कारका घटना भएका छन् । छाउघरमा बस्नु परेकै कारण कति केटीहरूले महिनाबारी भएपछि सुसाइड गर्न मन लाग्छ भनेको सुनेको छु । यस्तो पीडामा कसरी शान्ति हुन्छ ? युद्ध नहुनु नै शान्ति हुनु होइन । यो परिभाषा सिकाउन यस्तै साना लाग्ने, तर ठूला कुराबाट परिवर्तन थाल्नुपर्छ,’ उनको भनाइ छ ।
तर उनलाई थाहा छ, त्यसरी काम नगरे द्वन्द्व समाप्त हुँदैन, शान्ति आउँदैन । हिजो एउटाले अधिकारको लागि संघर्ष गर्यो, भोलि अर्कोले गर्छ । त्यसैले सम्पूर्ण ग्रामीण क्षेत्रको रूपान्तरणबाट मात्रै शान्ति सम्भव छ भन्ने उनको निष्कर्ष हो । उनी भन्छिन्, ‘तर नेपाल भनेको काठमाडौंमात्रै होइन । मेचीदेखि महाकालीसम्मको ग्रामीण वस्ती हो । त्यसको विकास गरेमात्रै दिगो विकास, शान्ति र मानवअधिकार सम्भव छ । त्यो मेरा सपना पनि हो ।’
अँ अन्तिममा, उनले ‘खलंगामा हमला’ लेख्दा नै उनलाई लागेको थियो, ‘यो किताब कम्तीमा १२ वटा भाषामा निस्कनुपर्छ ।’ नेपालको युद्ध र त्यसपछिको शान्तिपूर्ण रूपान्तरणको कथा विश्वले थाहा पाउनुपर्छ भन्ने उनलाई त्यतिबेला नै लागेको थियो । खुशीको कुरा प्रकाशक नेपालयले केही समयमै अंग्रेजी संस्करण प्रकाशित गरेको छ । उनी भन्छिन्, ‘लाग्छ, मेरो त्यो सपना पनि पूरा हुने बाटोमा हिँडिरहेको छ ।’
Tagsखलंगामा हमला महिनावारी राधा पौडेल